Kururamiswa nenyasha kuburikidza nokutenda muna Jesu Kristu
Man haagoni kuita pachake akarurama.
Kana Bhaibheri rinoti kuti munhu unonzi wakarurama, zvinoreva kuti iye anobva Mwari vakarurama, iye ari asunungurwa pachivi chake nokururamisa inowira Jesu Kristu. Anopembedza Mwari pachake.
Pfungwa yokururamiswa uye kururama kuita zvachose chinokosha Dzidziso chiKristu. Shoko tuzvikonzero mududziro Swedish Bhaibheri rakashandurirwa kubva chepakutanga echiGiriki, "dikaíoo", shoko riri shoko rechiito kuti zvinoreva kuti zviri pamutemo kududzira munhu mhosva. The munhu asunungurwa kubva mhosva iye ane. Unogona enzanisa pfungwa apo vatongi kana mutongi mudare inotsanangura mamwe "asina mhosva".
Man haagoni kuita pachake akarurama. Pauro anonyora muna 2 VaKorinde 5:18, 19
"Zvose zvinobva kuna Mwari, akatiyananisa achishandisa Kristu, akatipa ushumiri hwokuyananisa. Nokuti Mwari akanga ari muna Kristu achiyananisa nyika kwaari. Iye, pasingaverengwi zvivi vanhu, uye iye akaita kuti isu shoko rokuyananisa. "
"Vose vakatadza, muuye pakubwinya kwaMwari, uye vari mhosva pachena kuti ndakawana nayo nenyasha dzake, nekuti Kristu Jesu kuvadzikunura." VaRoma 3:23, 24
Mumwe mugumisiro kwokururamisa ichi nokutenda ndechokuti tine ukama hune rugare naMwari.
"Naizvozvo zvatinonzi takarurama nerutendo, tine rugare kuna Mwari kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu." VaRoma 5: 1
Zviri chete nyasha anouya panyaya kururamiswa
"Asi sezvo tichiziva kuti munhu haanzi wakarurama nemabasa emurairo, asi nerutendo rwaJesu Kristu, kunyange isuwo takatenda kuna Kristu Jesu, kuti tinzi takarurama nerutendo rwaKristu, uye kwete nemabasa emurairo. Nokuti kubudikidza nemabasa emurairo hakuna kuva kururamiswa. "VaGaratia 2:16
Zvisinei, kururamiswa Izvi zvakajeka uye kushanda kuburikidza Rufu rwaJesu, tinofanira kuve nokugamuchirwa nekutenda wacho kushumira ruponeso / kururamiswa naye.
Hapana saka hapana paminiti-Automatic-ruponeso. Tapota ona ichi zvakakosha!
Muna 2 VaKorinde 5:20, 21 tinoverenga, "Saka tiri nhumwa nekuda kwaKristu. Ndiye Mwari ari kusvitsa chikumbiro chake kubudikidza nesu. Tinokumbira nokuda kwaKristu , tichiti: Yananiswai naMwari. Uyo aiziva asina chivi, Mwari munzvimbo yedu akaita kuti ave chivi, nokuti maari tive kururama kwaMwari. "
Kunyange muTestamende Yakare, tinoverenga yokururamiswa nokutenda. Both muna 1 Eksodho 15: 6, VaRoma 4: 3 uye VaGaratiya 3: 6 inoti pamusoro Abhuramu (= Abrahamu) sei akatenda Mwari, uye sei zvikaverengwa kwaari kuti kururama. MunavaRoma 3:21, 22, Pauro anotaura kuti ikozvino kururama kwaMwari kwakaratidzwa, kuva mutemo nevaporofita apupure, kunyange kururama kwaMwari nerutendo rwaJesu Kristu kune vose vanotenda. Tinoona mundima idzi sei vose Murairo nevaporofita vakanga kare rakafanotaura kururamiswa nokutenda muna Jesu Kristu. Bhaibheri rinotiudza sei isu hatingazvirumbidzi chete tiruramiswe nokutenda muna Jesu Kristu, asi sei iye anova kururama kwedu! Jeremiah 23: 6 uye Jeremiya 33:16 inotaura Ishe kururama kwedu. Paul anoti 1 VaKorinde 1:30
"Ane kuti kadhi kuti imi muri muna Kristu Jesu, uyo akaita kuti isu Mwari uchenjeri, nekururama, nekuitwa vatsvene, nerudzikinuro"
Saka kururama kwaJesu Kristu, uyo anoverengera avo vanotenda maari, kuti chinoita Baba ndizvo isu vakarurama. Sezvo zvino tinoverenga muna nembiru mbiri, nezvaJesu Kristu, tariro yedu chete, saka haana Mwari munhu chokubata apo iye akanga ari mumunda weEdheni vamutadzira uye akasarudza kuenda nenzira yake. Hatina nezvevimbiso yaMwari chirongwa cheruponeso, nokutuma wake anodiwa Mwanakomana, Jesu, kuti zvigoneke kuti munhu ave isingachinji norugare naye. Akanga asina rufu rwaJesu Kristu rwokuzvibayira uye rumuko (VaRoma 4: 23-25), saka takanga zvose vakafa zvedu, rufu rwaJesu kutaura muna Johane 8:24.
Kuti agumise romukova iyi mutero uyu kuziviswa rwaIshe neMuponesi Jesu Kristu.
"Kunyange zvazvo akanga ari muchimiro chaMwari, haana kufunga kuti kuenzana naMwari, uve muripo asi akazvipa nokugamuchira muranda akava murume. Akawana chimiro chomunhu akazvininipisa uye akateerera kusvikira pakufa - kunyange rufu pamuchinjikwa. Saka Mwari vakamukudza zvikuru achakudzwa, vakamupa zita rinopfuura mazita ose, kuti muzita raJesu ibvi rose rifugame, kudenga nepanyika, nepasi penyika, uye ose rurimi oreururira Mwari Baba rukudzo kuti Jesu Kristu Jehovha "VaFiripi 2: 6-11..
Vecka 29, fredag 23 juli 2021 kl. 17:23